Al-shabaab oo la wareegtay Dhul ay ku jirto Macdanta Nukliyeerka laga..
Al-shabaab Oo La Wareegtay Dhul Ay Ku Jirto Macdanta Nukliyeerka Laga Sameeyo
Muqdisho (Dhamays) – Dowladda Soomaaliya ayaa Mareykanka si deg deg ah uga codsatey in ay Soomaaliya u soo diraan ciidamo dhulka ka dagaalama iyo sirdoon, si looga gacan siiyo waxa ay ku tilmaameen khatar ku soo socota Mareykanka, Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka.
Qoraal uu ku saxeexan yahay Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Yuusuf Garaad Cumar oo ku socotay safiirka Maraykanka ee Soomaaliya, Stephen Schwartz ayaa lagu faah faahiyey xidhiidh la sheegey inuu dhexmarey Al shabaab-ISIS iyo Iran, kaas oo salka ku haya macdanda Uraniumta ee laga farsameeyo hubka Nukliyeerka.
Warqaddan ayaa lagu sheegey in Al-shabaab ay la wareegeen dhul ay ku keydsan tahay Uranium oo ku taala gobolka Galmudug ee Soomaaliya, taas oo ay dhici karto in looga dhoofiyo dalka Iran oo daneynaya.
Qoraalkaas ayaa lagu sheegey in AMISOM ayna hadda awood u laheyn in ay wax ka qabato khatartaas ay dowladdu tilmaantey ee ka soo socota gobollada dhexe ee Soomaaliya.
Dowladda ayaa sheegtay in Mareykanka ay yihiin awoodda kaliya ee wax ka qaban karta qatartaas soo fool leh.
Previous: Berbera: Hal Qof Oo Badda Ku Dhintay Iyo 3 Kale Oo La Soo Bedbaadiyey
Next: Madaxweyne SIILAANYO Oo Dalka Ku Soo Laabtay, Ka Dib Qalliin Uu Ku Galay Imaaraadka